Loolanka Al Shabaab iyo Daacish ee gudaha Soomaaliya - BBC News Somali
Loolanka Al Shabaab iyo Daacish ee gudaha Soomaaliya
Xigashada Sawirka, BBC MONITORING
Dagaalkii ugu dambeeyay ee IS iyo Al Shabaab wuxuu ka dhacay deeganno ka tirsan Puntland
Dagaalka iyo loolanka ka dhexeeyo Xarakada Al Shabaab iyo kooxda la magac baxday Dowladda Islaamka ee Daacish ayaa maalmihii ugu dambeeyay wuxuu isku baddalay hanjabaad ay isku jeedinayeen labada kooxood oo ku aadan ka arriminta deeganno gudaha Soomaaliya, kaddib markii dhawaan ururka IS ay dagaal ku qaadeen dagaallamayaal ka tirsan Al Shabaab, sida ay warbixintan ay ku eegeyso qeybta warqabadka ee BBC-da.
Waxaa soo socday dagaal saddex sanno oo qarsoodi ah oo u dhexeeyay labadan kooxod.
Dhawaan hoggaanka sare ee Al Shabaab ayaa ku dhawaaqay dagaalka ka dhan ururka IS ee ka dagaallama Soomaaliya isla markaasna ugu yeeray 'cudur dilaa ah' oo ah in la dabar gooyo.
Hadalka kasoo baxay Shabaab ayaa yimid wax ka yar toddobaad un markii dagaalyahanno ka tirsan IS ay dagaal ku qaadeen Deegan ay Shabaab maamulaan oo ku yaalla Waqooy bari ee Soomaaliya.
Dabayaaqaadii sannadkii 2015-kii ayay aheyd markii IS ay jihaad kaga dhawaaqday Soomaaliya, wixii intaa ka dambeeyay na wuxuu dagaal ka dhex qarxay iyag iyo AL Shabaab. ISIS waxay bilaawday inay qabsato deeganno hor leh.
Al Shabaab waxay sheegtay in kooxda IS ay ka shaqeynayaan sidii tafaraaruq looga dhex abuuri lahaa gudaha Al-Shabaab iyo sidoo kale inay caqabad ku noqdeen ''Jihaadka''.
Al-Shabaab oo muddo kooban haysatay Ceel waaq
Maraykanka: Waxaan dilnay 37 Al Shabaab ah
IS waxay ugu baaqeen ururada kale ee ''jihaad-doonka'' ah inay kusoo biiraan kooxdooda, isla markaasna ciddii kasoo horjeesata mabaadii'dooda ay u aqoonsan yihiin cadow.
16-bishii December, ururka IS waxay soo saareen bayaan ay ku sheegayaan inay dileen 14 kamid ah dagaalyahanada Al Shabaab oo ku sugnaa magaalada Qanddala oo ku taalla Puntland. Waa markii ugu horreysay oo ay IS sheegtay dagaal ka dhan kooxda uu dagaalka ka dhexeeyo ee Shabaab gudaha bariga Afrika.
Labo maalin kaddib waxay soo saareen muuqaal muujinayo dagaal dhexmaray iyaga iyo Al Shabaab iyo sawirro meyd ah.
Bishii November ee sannadkii 2016-kii, IS waxay cabasho ka muujiyeen Al Shabaab oo ay sheegeen inay dhibaateyn iyo iyo dil ku hayaan taageerayaasha iyo xubnaha ka tirsan ururka IS. IS waxay sheegeen in aysan joojin doonin dagaalka ka dhan Shabaab waa haddii aysan joojin dagaalka.
Xigashada Sawirka, AL-SHABAB
Hoggaanka sare ee Al Shabaab wuxuu ku tilmaamay Daacishta Soomaaliya cudur dilaa ah
20-kii bishan December, wargeyska toddobaadlaha ah ee IS ee Al Naba ayaa soo qoray maqaal ku saabsan dagaal iyaga Shabaab ku dhexmaray Soomaaliya, waxaa uu ciwaan uga dhigay 'Iska caabintii ugu horreysay, waxaa soo socda ayaa ka daran'.
Isla 20-kii bishan December, bayaan cod ah uu akhrinyay afahayeenka Shabaab, Sheeikha Cali Raage ayaa waxaa uu sheegay in IS ay yihiin koox banneysatay dhiigga dadka, dulmi iyo tacaddiyo ka gaysata Soomaaliya.
Wuxuu ugu baaqay dagaallamayaasha Al Shabaab inay dabargooyaan waxaa uu ugu yeeray Kansarka oo uu ugala jeedo IS
Cali Dheree ayaa sidoo akle sheegay: ''Al Shabaab waxay in muddo ah indhahaka daboolaneysay dagaallamayaasha IS ee ku sugan Soomaaliya, si ay isaga ilaaliso inuu dhiig daato''.
Maleeshiyeedka taabacsan Daacish ayaa sheegay in Al-shabab ay bartilmaameedsaneysay dagaalyahannadeeda maadaama ay ka walwalsan tahay awoodda ay ku dhex yeelanayaan Soomaaliya iyo ciidammada badan ee ka soo goosanaya xarakada taabacsan Al-Qaacida.
Inkastoo ay jiraan farrimo lamid ah farrinta ay jeediyeen ururada Al Qaacida taabacsan ee kasoo horjeedo IS, weli Al Shabaab waxay ku adkeysaneysaa dagaal ka dhan Daacishta Soomaaliya.
Maxaa xigi karaa?
Kooxda taabacsan IS ee ka dagaallanta Soomaaliya waxa tiradoodu lagu qiyaasaa inay gaareysa 150 ilaa 300, halka dagaalyanahanada Al Shabaab na ay gaarayaan inta u dhexeeysa 5000 ilaa 7000.
Al Shabaab ayaa waxay ka taliyaan dhul badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya, waxaana sidoo kale ay joogaan deegaano katirsan Puntland, inkastoo halkaasi ay uga badan yihiin kooxda ISIS.
Kooxda taabacsan ISIS ayaa inta badan ka howlgalaan buuraha Galgala ee Puntlanda.
Weerarada IS ay ka fuliyeen Soomaaliya sannadka 2018-ka
Inkastoo sannadka 2018-ka ay kooxda IS weeraro aan sidaasi u weyneyn ka geysatay Soomaaliya ayaa haddana waxaa la is oran karaa waxay ku guuldareysteen inay fuliyaan weeraro lamid ah kuwa Shabaabka ay geystaan.
Kooxda taabacsan IS ee Soomaaliya waxay weeraro ku qaadeen goobaha dadka ay isugu yimaadaan oo ay ku beegsadaan dad rayid ah iyo kuwa katirsan laamaha ammaanka, halka Shabaab na ay fuliyeen weeraro lagu qaaday ciidammada AMISOM iyo qaraxyadii ugu dhimashada badan ee ka dhaca qaaradda Afrika.
Balse sida ay sheegayaan dadka ku xeeldheer arrimaha ammaanka, tirada badan ee Al Shabaab kama dhigno inay si degdeg ah uga guuleysan karaan Daacishta Soomaaliya.
Tan iyo markii kooxaha taabacsan IS ay dagaal ka bilaabeen bishii Nofember ee sannadkii 2014-kii dalka Yemen iyo bishii Janaayo 2015-kii dalka Afqanistaan, ururadda ka tirsan IS waxay la kulmeen mucaarado iyo dagaal uga imaanayay ururadda AQAP iyo Talibaan.
Al-Shabaab oo sheegatay masuuliyadda qaraxyadii Muqdisho ka dhacay galabta
Rwanda oo lagu dilay rag Al-Shabaab lagu xiriirinayo
Dagaalka ka dhex qarxay kooxaha jihaad-doonka ayaa la aaminsanyahay inay hoos u dhigeysaa sumcaddooda, isla markaana ay ku weyn karaan taagerayaal badan.
Ururka taabacsan Daacish waxay Somaaliya ka bilaabeen dagaalka bishii October ee sannadkii 2015-kii, dagaalyahano badan oo kasoo goostay Shabaab ayaana ku biiray kooxdooda.
Bishii Luulyo ee sannadkan waxay Daacishta Soomaaliya isugu yeereen magaca 'Wilaayah' inay yihiin xubin rasmi ah oo ka tirsan kooxda isugu magacaawday Khilaafada Islaamka.
Xigashada Sawirka, ISLAMIC STATE PROPAGANDA
Bishii July ee sannadkan, waxay 'Wilayaah' kaga dhawaaqeen Soomaaliya
Dhanka hoggaanka, waddaadka fadhigiisu ahaan jiray Ingriiska Cabdulqaadir Al Mumin ayaa lagu soo warramay inuu hoggaamiyo kooxda taabacsan Daacishta Soomaaliya, inkastoo labadii sanno ee ugu dambeysay aanan lagu xusin warbaahinta faafisa sheegashooyinka IS.
Cabdulqaadir Mumin ayaa horraan kasoo baxay Shabaab, bishii October ee sannadkii 2015-kii wuxuu kasoo muuqday muuqaal uu ku sheegayo inuu ku biiray hoggaamiyaha ururka IS Abuu Bakar Al Baqdaadi,waxayna hoggaamiye ku-xigeen u doorteen Mahad Macalin.
Daacishta Soomaaliya waxay dadaal ugu jireen sidii ay ku qoran lahaayeen dagaallamayaal ay ku xoojinayaan joogitaankooda Soomaaliya oo ay kaga badan yihiin Al Shabaab. Bishii Marso ee sannadkii 2016-kii,kooxda taabacsan Daacishta Soomaaliya waxay qirteen in awooddooda ay hoos u dhacday, cadaadisna ay kala kulmayaan Al Shabaab.
Al Shabaab waxay qaaday howlgal ay ku weerarayaan maleeshiyaadka IS ee ka dagaallama Soomaaliya, xubnaha doonayay inay ku biiraan IS ayay xabsiga u taxaabeen halka qaar kalena ay dileen.